छोरीको नाममा आफूमाथि भुवनको यौ-न दुर्व्यवहार गरेको साम्राज्ञीको आरोप (भिडियोसहित) – Online Nepal
छोरीको नाममा आफूमाथि भुवनको यौ-न दुर्व्यवहार गरेको साम्राज्ञीको आरोप (भिडियोसहित)
July 1, 2020 198
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले केही दिन अगाडी सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफूले केही चलचित्रकर्मीसँग काम गर्दा दुःख पाएको उल्लेख गरिन् ।उक्त बिषय निकै चर्चामा रह्यो ।साम्राज्ञीले यसो भनिरहँदा उनको कटाक्ष नायक भूवन केसीमाथि पनि थियो ।साम्राज्ञीलाई भूवनले चलचित्र ‘ड्रिम्स’बाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गराएका हुन् ।साम्राज्ञीले बारम्बार आक्रोश व्यक्त गर्दै सामाजिक संजालमा नाम नै लिएपछि भूवन केसीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
भूवन लेख्छन्–‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक संजालमा रोई कराई गर्ने नायिका अहिले कुन चलचित्रको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ?जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने । सामाजिक संजालमा गर्ने अभिनय फिल्ममा गरे हुने नी ।’भूवनले साम्राज्ञीले आज पनि ‘ड्रिम्स’कै ब्रान्ड बेचेर चलचित्र क्षेत्रमा नाम कमाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।साम्राज्ञीले पनि भुवनलाई लक्षित गर्दै इन्टाग्राममा स्टोरी हालेकी छिन् ।उनको स्टोरी कस्लाई लक्षित हो भन्ने कुरा नखुले पनि भुवनलाई नै टार्गेट गरेकाे बुझ्न सकिन्छ ।
यसरी नेपाली फिल्मी उद्योगमा एकले अर्कालाई आरोप प्र-त्यारोप लगाउने चलन यो पहिलोपटक भने होइन् । केही समयअगाडीदेखि नायिकाद्वय पूजा शर्मा र शुष्मा कार्कीबीचको शितयु-द्ध अझै समाप्त भएको छैन । नेपाली चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले नायक भुवन केसीमाथि यौन दु-र्व्यवहारको आरोप लगाएकी छन् ।
केसीले आफूलाई पटक पटक गलत नियतले छोएको बताउँदै साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेकी छन् । सम्बोधनमा आफूलाई छोरी भनेपनि केसीले पटक पटक यौ-न दुर्व्य-वहार गरेको साम्राज्ञीले बताइन् । केही समय अघि साम्राज्ञी र केसीका छोरो नायक अनमोल केसी प्रेम सम्बन्धमा रहेको समेत खुलेको थियो । साम्राज्ञी ड्रिम फिल्मबाट सिने जगतमा प्रवेश गरेकि थिइन् । यस फिल्मका निर्माता नायक भुवन केसी थिए भने हिरोको रोलमा उनका छोरा अनमोल थिए ।
यही फिल्मको सुटिङको बेला अनमोल र साम्राज्ञीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको थियो । अहिले भने केही कारणले उनीहरुबीच सम्बन्ध टुटीसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भुवनविरु-द्ध साम्राज्ञीले आवाज उठाएसँगै उनीहरुबीच सम्बन्ध बिग्रनुको कारण समेत खुलेको छ । साम्राज्ञीले ड्रिम फिल्मको सुटिङदेखि नै आफूमाथि भुवनको गलत दुष्टि-कोण रहेको जनाएकी छन् । जापानमा भएको एक अवार्डमा समेत भुवनले आफूलाई दुर्व्य-वहार गरेको साम्राज्ञीले खुलाएकी छन् । आफ्नै छोराको राम्रो साथी समेत रहेकी एक युवतीलाई भुवनले गरेको व्यवहारले उनको व्यक्तित्वमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
Prevबिहेको दुइ दिनमै सिन्दुर पुछियो, जन्ती गएका ५१ जनामा कोरोना संक्रमण
Nextजसलाई सुशान्तले धोका दिए, उनै बनिन् परिवारको सहारा
मन्दिरमा घण्टी बजाउनुका यी १० फाइदा, जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ ?
एनसेल कम्पनी कारबाहीमा ,कारण यस्तो
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50309)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44842)